पोपिएसले गुगल भुक्तानी लिन्छ? - उत्तरहरू
घर / सम्पर्कविहीन, गुगल भुक्तानी, भुक्तानी / पोपिएसले गुगल भुक्तानी लिन्छ?
पोपिएसले गुगल भुक्तानी लिन्छ?
1 पोपिएसको परिचय
3 पोपिएसले गुगल भुक्तानी स्वीकार गर्दछ?
4 तपाईं कसरी पोपिएसमा गुगल भुक्तानी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
4.1 तपाइँको एन्ड्रोइड फोनमा गुगल भुक्तानी सेटअप कसरी गर्ने
4.2 तपाईंको एन्ड्रोइड वाचमा गुगल भुक्तानी सेटअप कसरी गर्ने
4.3 तपाईंको Android फोनको साथ पोपिएसमा गुगल भुक्तानी कसरी प्रयोग गर्ने
4.4 पोपिएसमा एन्ड्रोइड वाचको साथ गुगल भुक्तानी कसरी प्रयोग गर्ने
5 कसरी पोपिस अनुप्रयोगको साथ गुगल भुक्तान प्रयोग गर्ने
पोपिएस लुइसियाना किचेन एक ग्लोबल फ्राइड चिकन फास्ट फूड रेष्टुरेन्ट श्रृंखला हो जुन १ 1972 XNUMX२ देखि प्रेमको साथ फ्राई भएको कुखुराको सेवा गर्दछ। तिनीहरू नियमित र मसलादार कुखुराको स्वादिष्ट पक्षको साथ नियमित बनाउँदछन्। तिनीहरू मेरो मनपर्ने कुखुराको स्थान हो र म आशा गर्छु कि तिनीहरू पनि तपाईंको हुन्!
तिनीहरू १ 1972 3,100२ मा लुइसियानामा स्थापना भएदेखि नै विश्वव्यापी सनसनी भए। 30० देश र 40० राज्यहरूमा XNUMX,,१०० भन्दा बढी पोपिएस छन्।
गुगल भुक्तानी एक सजीलो गर्न को लागी, सम्पर्क रहित भुक्तान विधि हो जुन तपाईंको गुगल उपकरणहरूसँग काम गर्दछ जस्तै तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन, ट्याबलेट, वा वाच। तपाईं यसलाई व्यक्तिमा स्टोरहरूमा, अनुप्रयोगहरू मार्फत, वा वेबमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाइँको भुक्तानी गर्न को लागी एक सुरक्षित, सुरक्षित तरीका हो। परिवर्तनका लागि पर्खने दिनहरू वा क्रेडिट कार्ड रिडर प्रयोग गर्नका दिनहरू भयो जुन हजारौं अन्य फोहोर कार्डहरू पहिल्यै भइसकेका छन्। गुगल भुक्तान आधुनिक संसारको लागि एक आधुनिक भुक्तानी विधि हो।
तर पोपिससँग गुगल भुक्तानी छ?
पोपिएसले गुगल भुक्तानी स्वीकार गर्दछ?
हो, पोपिएसले गुगल भुक्तानीलाई रेस्टुरेन्टमा भुक्तानी विधिको रूपमा लिन्छ! पोपिएसले २०१२ देखि Google Pay लाई स्वीकार गरिसकेका छन र अन्य सम्पर्कविहीन भुक्तान विधिहरू जस्तै एप्पल पे र सामसु Pay पे।
यहाँ अगस्त २०१ from को समाचार लेख छ जसले पोपिएसले Google भुक्तानी लिने पुष्टि गर्दछ।
तपाईं कसरी पोपिएसमा गुगल भुक्तानी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
गुगल पे प्रयोग गरेर पोपिएस अर्डर गर्न तयार हुनुहुन्छ? पहिले, के तपाईंले आफ्नो Android फोन, ट्याब्लेट, वा हेर्नुभयोमा गुगल भुक्तानी सेट अप गर्नुभयो? यदि तपाईंले पहिले नै यो सेट अप गर्नुभयो भने, तपाईं अर्को सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ; अन्यथा, मा पढ्नुहोस्।
तपाइँको एन्ड्रोइड फोनमा गुगल भुक्तानी सेटअप कसरी गर्ने
तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा गुगल भुक्तानी सेट अप गर्न यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
तपाईको एन्ड्रोइड फोन अनलक गर्नुहोस्।
गुगल भुक्तानी अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
गुगल भुक्तानी अनुप्रयोगको शीर्ष बायाँ कुनामा, 'मेनू' ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि 'भुक्तानी विधिहरू' छनौट गर्नुहोस्।
तपाईंले सक्षम गर्न चाहानुभएको भुक्तानी विधि छनौट गर्नुहोस् र 'सम्पर्कविहीन सक्षम' चयन गर्नुहोस्।
गुगलका निर्देशनहरू पालना गरेर तपाईंको भुक्तानी विधि प्रमाणित गर्नुहोस्।
तपाईंको एन्ड्रोइड वाचमा गुगल भुक्तानी सेटअप कसरी गर्ने
तपाईंको एन्ड्रोइड घडीमा गुगल भुक्तानी सेट अप गर्न यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
तपाईंको घडी अनलक गर्नुहोस्।
'सुरू गर्नुहोस्' चयन गर्नुहोस्।
अर्को, तपाइँको वाचको स्क्रीन लक सेटअप गर्नुहोस् यदि यो अहिले सम्म गरिएको छैन।
तपाईंको लि linked्क गरिएको एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गरेर, तपाईंको घडीले क्रेडिट वा डेबिट कार्ड थप्न निर्देशनहरू धक्का दिन्छ। निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
तपाईंको क्रेडिट वा डेबिट कार्ड अब तपाईंको घडीमा छ।
अब तपाइँ तपाइँको घडी गुगल पे संग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको Android फोनको साथ पोपिएसमा गुगल भुक्तानी कसरी प्रयोग गर्ने
यदि तपाईं पोपिएसमा गुगल भुक्तानीको साथ भुक्तान गर्न एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
सम्पर्क रहित भुक्तान रिडरमा तपाईंको फोनको पछाडि समात्नुहोस्। यो सामान्यतया मसिनमा जोडिएको हुन्छ जुन तपाईं सामान्य रूपमा तपाईंको क्रेडिट कार्ड राख्नुहुन्छ।
जब तपाईंको भुक्तानी पूरा हुन्छ, तपाईं आफ्नो फोनको स्क्रिनमा निलो चेकमार्क देख्नुहुनेछ।
केहि स्टोरहरूमा, तपाईंलाई डेबिट कार्डको साथ भुक्तानी गर्ने बेला तपाईंको पिन प्रविष्ट गर्न वा क्रेडिट कार्डको साथ भुक्तानी गरेको खण्डमा साइन इन गर्न तपाईंलाई प्रोम्प्ट गरिनेछ।
तपाई अब चेक आउट हुनुभयो!
पोपिएसमा एन्ड्रोइड वाचको साथ गुगल भुक्तानी कसरी प्रयोग गर्ने
जब तपाईं आफ्नो घडीको साथ जाँच गर्न तयार हुनुहुन्छ, यी चरणहरूको पालना गर्नुहोस्:
तपाईंको घडिमा गुगल भुक्तानी अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
सम्पर्क नगरी भुक्तान रिडरमा तपाईंको एन्ड्रोइड वाच होल्ड गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं एक आवाज सुन्नुहुन्न वा तपाईंको घडीबाट कम्पन महसुस गर्नुहुन्न।
यदि सोधियो भने, यो क्रेडिट वा डेबिट कार्ड हो कि होइन, कार्ड प्रकारको रूपमा 'क्रेडिट' छनौट गर्नुहोस्।
यदि तपाईं लि linked्क गरिएको कार्ड डेबिट कार्ड हो भने, तपाईंले आफ्नो PIN प्रविष्ट गर्नु आवश्यक पर्दछ। यदि प्रोम्ट गरियो भने, तपाइँको पिन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कसरी पोपिस अनुप्रयोगको साथ गुगल भुक्तान प्रयोग गर्ने
दुर्भाग्यवश, पोपिएसको मोबाइल अनुप्रयोगले Google Pay लाई समर्थन गर्दैन। तपाईं अझै पोपिएस भित्र गुगल भुक्तान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईं एप्पल पे वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर अनुप्रयोग मार्फत जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
एन्ड्रोइडandroid payअनुप्रयोग आधारित भुक्तानसम्पर्क रहित भुक्तानचाँडो खानाgoogle payगुगल भुक्तानी रेस्टुरेन्टpopeyesपोपिएस कुखुरापोपिएस लुइसियाना भान्छारेस्टुरेन्ट सम्पर्कविहीनगुगल भुक्तानीभुक्तानी
के चिपोटलले Google भुक्तानी स्वीकार गर्दछ?
वालमार्टले सामसु Pay्ग भुक्तान लिन्छ?
वालमार्टले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
नाई टिप क्यालकुलेटर 1880
के तपाइँ टिप एएए गर्नुहुन्छ? 1608
न्यूयोर्क ट्याक्सी सल्लाह 1568